tattoos Chakra: fikradaha la xiriira Hinduism iyo suufnimada | tattooists
tattoos Chakra: fikradaha la xiriira Hinduism iyo qarsoodinimada
Tattooyada Chakra waxaa dhiirigeliyay walxahan aadka u xiisaha badan ee Hinduism iyo yoga, sidaas darteed waxay ku habboon yihiin kuwa raba inay tattoo wax la xidhiidha dhinacyadan aqoonta iyo taabashada qarsoodiga ah.
Marka xigta waxaan arki doonaa sida looga faa'iidaysto tattoo, sidoo kale waxaan ka hadli doonaa waxa ay yihiin iyo todobada chakras ee kala duwan si aad u tixgeliso ka hor intaanad tattoo samayn. Sidoo kale, haddii aad rabto inaad ku sii waddo khadkan ruuxiga ah, waxaan sidoo kale kugula talineynaa inaad akhrido maqaalkan kale ee ku saabsan om calaamad tattoos.
1 Waa maxay chakras?
2 Waa maxay chakras?
3 Sida looga faa'iidaysto tattoos chakra
3.1 Si fiican u dooro meesha
3.2 Ku dar walxaha kale
3.3 Sii taabashada midabka
4 sawirada tattoo chakra
Waa maxay chakras?
Hubaal haddii aad halkan joogto, waxaad si fiican u garanaysaa waxa chakras yihiin, in kastoo, si aad u hubiso, aynu yara qeexno.
Sida laga soo xigtay Hinduism iyo yoga, chakras waa todoba dhibcood oo tamar ah oo ku jira jidhka bini'aadamka ee ka soo baxa saldhigga lafdhabarta ilaa taajka., oo ku yaala meelo kala duwan oo endocrine ah. Mid kastaa wuxuu ku xidhan yahay midab kala duwan iyo ilaahnimo, iyo sidoo kale hawlo kala duwan. Si ballaaran, chakra-yada waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin albaab noo ogolaanaya inaan ku xirno adduunka jireed (taas oo ah, jirkeena) oo leh adduunyo qarsoodi ah ama gudaha ah (taas oo ah, maskaxdeena).
hay todoba chakras oo waaweyn (ku yaal halka aan kor ku soo sheegnay, tiirka oo dhan) iyo carruur aan tiro lahayn. Toddobada ugu muhiimsan, iyo sida cad ikhtiyaarka ugu caansan ee tattoo, waa:
Sahasrara, chakra miyir-qabka, waxay la xiriirtaa midabka casaanka, ilaah Shiva oo leh shaqada isku xirka ilaah. Waxay ku taal taajka.
Ajna, chakra cafiska, waxay la xiriirtaa midabka lilac, ilaahnimada Ardhanari, waxayna leedahay shaqada ah inay ku siiso dareen. Waxay ku taal indhaha.
Vishuddha, chakra isgaadhsiinta, waxay la xidhiidhaa midabka buluuga ah iyo ilaahnimada Krishna. Shaqadeedu waa hadal (oo loo fahmay qaamuus iyo is-muujin) waxayna ku taallaa dhuunta.
Anahata waxaa loo arkaa chakra geesinimada iyo ammaanka. Waxay la xiriirtaa midabka cagaaran iyo ilaahadda Durga. Waxay leedahay shaqada bixinta naxariis iyo bogsiinta.
Manipura Waa chakra ee qanacsanaanta iyo nabadda. Midabkeedu waa huruud iyo ilaaha ay ku xidhan tahay ee Vishnu. Waxay ku taal caloosha waxayna u xilsaaran tahay sirdoonka.
Svadhishthana Waa chakra aqoonta iyo hal-abuurka. Waxay la xiriirtaa midabka orange-ka iyo ilaahnimada Brahma. Waxay ku taallaa xuddunta waxayna mas'uul ka tahay dareenka.
Muladhara, chakra ugu dambeeya, waxay la xiriirtaa dembila'aan iyo xigmad. Midabkiisu waa casaan iyo ilaahnimadiisa Ganesh. Shaqada chakraani waa tan dareenka iyo firfircoonida galmada.
Sida looga faa'iidaysto tattoos chakra
Ka baxsan naqshadaha ugu caansan, kuwaas oo aan sidoo kale ka hadli doono, tattoos kuwaas oo leh dhibcaha tamarta ee jirka sida protagonists ayaa aad u dheer.. Si tattoo-gaaga ugu dambeeya uu u ahaado mid asal ah intii suurtogal ah, waxaa aad loogu talinayaa:
Si fiican u dooro meesha
Tattooyada Chakra waxay u muuqdaan in lagu sameeyo meel aad u cad: dhabarka. Sababta ay u caddahay, chakras laftoodu waxay ku dhex maraan meeshan laga bilaabo taajka madaxa ilaa lafta dabada, taas oo marka hore u muuqata meesha ugu habboon ee tattooed.
Laakiin si kastaba ha ahaatee, waa in aynaan ka tagin meelo kale oo asal ahaan ka sii badan. Tusaale ahaan, waxaad dooran kartaa cududda, cududda ama lugta ama xitaa, haddii aad rabto naqshad aad u yar, dhinaca farta. Dhinaca qoorta sidoo kale aad bay u qabow yihiin.
Xeeladdu waa, Maaddaama ay tahay naqshad toosan (ilaa inta aad doorato inaad tattoo toddobada chakras, dabcan), waxaad doorataa meesha iyada oo la tixgelinayo tan iyo in, marka lagu daro, u dhigma xajmiga. Sidaa darteed, tattoo yar oo dhabarka ah laguma talin doono sababtoo ah naqshadeynta ayaa lumay maqaarka badan.
Ku dar walxaha kale
Chakras kuma xirna oo kaliya meel jirka ka mid ah, liddi ku ah, waxay leeyihiin walxo kale oo badan oo si fiican loogu dari karo (sida midabka, laakiin waxaan kaga hadli doonaa qodobka soo socda).
Mid ka mid ah walxaha ugu quruxda badan ee dhibcaha tamarta ay ku xiran yihiin waa ubaxa lotus, kaas oo sidoo kale calaamad u ah iftiiminta. Tani waxay u horseedi kartaa iskudhafyo badan (oo aad u fiican), sida naqshado fudud oo leh kaliya dulucda tufaaxyada ama naqshado badan oo macquul ah oo chakra gaar ah u taagan yahay.
Sidoo kale, waxaad kaloo la wadaajin kartaa ilaahood. Tattoo noocan oo kale ah, qaab midab leh ayaa si weyn loogu talinayaa, oo ku salaysan farshaxanka Hinduuga, oo aad u faahfaahsan, kaas oo chakra uu waxoogaa hoos u dhigi doono booska labaad.
Sii taabashada midabka
Ugu dambeyntii, ogaanshaha sida loo bixiyo taabashada midabka chakras sidoo kale waa muhiim si loo gaaro naqshad gaar ah oo asal ah. Inkasta oo chakra kastaa uu la xiriiro midab horay loo sii go'aamiyay, ha ka tagin inaad siiso codkaaga (tusaale ahaan, midabka biyaha waxay u muuqdaan kuwo aad u qabow, inkasta oo aanad ka fogaan midabada ugu dhalaalaya ama xitaa midabada pastel, oo leh taabashada pointilism. , sidii adigoo u dabaaldegaya hi). Intaa waxaa dheer, midabku wuxuu ku koobnaan karaa chakra ama "ka soo baxa" qaab firidhsan. Doorashadan ugu dambeysa waxay siin doontaa hawo firfircooni iyo dhaqdhaqaaq naqshadda aadka loogu taliyay.
Tattooyada Chakra waa kuwo aad u badan marka loo eego sida ay u muuqato jaleecada hore, tan iyo, sida aad aragtay, kuma koobna oo kaliya dhabarka. Noo sheeg, ma haysaa wax naqshad ah oo meelahan tamarta ah? Ma ku fakaraysaa inaad mid samayso? Waa maxay nooca chakra ee aad ugu jeceshahay?
sawirada tattoo chakra
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Noocyada Tattoo-ka » Tattoos leh qaabab » tattoos Chakra: fikradaha la xiriira Hinduism iyo qarsoodinimada
Tattooyada markabka burcad-badeedda: fikradaha ugu fiican ee lagu tattoo adiga
Tattoo beer, fikrado rooti maqaarkaaga ah